စာသင်ကျောင်း ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အစီအစဉ် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်သုံးခုရှိ ကျောင်း ၂ဝ ကျေ? - Yangon Media Group
စာသင်ကျောင်း ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အစီအစဉ် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်သုံးခုရှိ ကျောင်း ၂ဝ ကျေ?
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားပါက ထိခိုက်မှုလွယ်သောသူများမှာ ကလေးများဖြစ်သည့်အတွက် စာသင် ကျောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအစဉ်ကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် သုံးခုရှိ ကျောင်း ၂ဝ ကျော်တွင်ပြု လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အက်ရှင်အေ့ဒ်မြန်မာနှင့် ပလန်အင်တာနေရှင်နယ်မြန်မာမှ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာသင်နှစ်များ တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်မည့်ကျောင်းနှင့် ကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် များမိတ်ဆက်ခြင်းကို ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပန်ဒါဟိုတယ်၌ ပြု လုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါအစီအစဉ်အရ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျရောက် ပါက ကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်း များ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ် ပွားပါက ပြည်သူများခိုလှုံနိုင်သည့် ကျောင်းများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှတစ်ဆင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပါကပြု လုပ်ရမည့်နည်းများကို ဖော်ထုတ် မျှဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှ သိရသည်။
”ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာအချိန်ရဲ့ ၃ဝ၊ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို အချိန်ကုန်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပညာသင်ကြားတာနဲ့အတူ သဘာဝဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာရှိထားမယ်ဆိုရင် သူတို့ဆီကနေပြန်မျှဝေမယ့် အပိုင်းကပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။သဘာဝဘေးအုပ်စုမှာခွဲရင် ကလေး သူငယ်တွေက ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အုပ်စု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိ ပညာရှိထားမယ်ဆိုရင်တကယ် ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာ ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဝင်းရှိန်က တက်ရောက်အမှာစကားပြော ကြားရင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သဘာ ဝဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံကို ခံစားနေ ရသော နိုင်ငံများထဲတွင်ပါဝင်ပြီး ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရေဘေးကြောင့် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနလက်အောက်ရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်း ၄ဝဝဝ ကျော်သည် ရေ ကြီးမှုဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရကာ ကျောင်း ပေါင်း ၆ဝဝ မှာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီး ကလေးသေဆုံးမှု ၂၇ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဘေး ကင်းလုံခြုံရေးအစီအစဉ်ကို ရန် ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်ငါးမြို့ နယ်မှ အခြေခံပညာကျောင်းကိုး ကျောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြား မြို့နယ်ရှိ ယာယီစာသင်ကျောင်း ခြောက်ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေးကျောင်းငါးကျောင်း နှင့် အခြေခံပညာကျောင်းလေး ကျောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်ရှိ အခြေခံ ပညာကျောင်းနှစ်ကျောင်းတွင် ပြု လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
”စာသင်ကျောင်းတွေဟာ ပညာသင်ကြားပေးတဲ့နေရာဖြစ်သလို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ် လာတဲ့အခါ ခိုလှုံရာနေရာတစ်ခု အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် အများစုအတွက်အ ထောက်အပံ့ပေးမယ့် အကူအညီ ပေးနိုင်မယ့်နေရာတွေဟာ စာသင် ကျောင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီးပညာရေးမှူးရုံးမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါ်ခင်မာ ဆွေကပြောကြားသည်။ MCCR Project ကို၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီး သည့်အချိန်မှ စတင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် ဇွန်လမှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ စတုတ္ထမြောက်စီမံကိန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
အနားမယူမီ ပရီးမီးယားလိဂ်၌ အဲလ်ဗက်စ် ကစားလို
တောင်တရုတ် ပင်လယ်တွင် တရုတ်ရေတပ် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မည်